Ilaaliyeyaasha Madow waxay soo jeediyaan ficil waali ah oo weyn OST | Androidsis
Mas'uuliyiinta Madoow waa mid ka mid ah cinwaannadaas in aan uur yeesho maadaama aysan taasi ka maqnaan karin xusuusta gudaha isticmaalaha oo ku raaxeysta ciyaaraha aaladaha mobilada.
Ciyaar fiidiyoow ah oo leh soo jiidasho weyn sida muuqaalkeeda weyn, ficilkeeda jahwareerka ah iyo heesta anthological. Oo waxaad u maleyn kartaa inaan wajaheyno ciyaar adag, laakiin haba yaraatee, maaddaama makaanikada ay aad u fudud tahay. Waxay ka kooban tahay qaadashada nooc samurai ah meelo kala duwan oo cadawga ugu badan ee aan u badnayn uu u boodayo inuu naga hor tago si aan uga gudubno xirfadaheena seefta oo had iyo jeer ay weheliyaan dhawaaq dhawaaq asal ah oo ay tahay inaad dhageysato si aad ugu raaxaysato.
1 Ilaaliyayaasha Madowga ah iyo seeftooda dilaaga ah
2 Muuqaalka codka iyo hareeraheeda
3 Farsamoyaqaannada fudud ee ciyaarta weyn
4 Jetpack Joyride ayaa mustaqbal ahaan loo dhigay bedel ahaan
Ilaaliyayaasha Madowga ah iyo seeftooda dilaaga ah
Ilaaliyeyaasha Madoow waa ciyaar indie ah in ay sifiican uheleysay sida cusbooneysiinta kaladuwan ay udhacday iyo sida khamriga wanaagsan uu uqaadanaayo dhadhan kaduwan kolba waqtiga kadambeeya.
Mas'uuliyiinta Madoow ayaa ku qaadan doona iyada oo loo marayo riwaayad epic ah waxayna noqon kartaa isku dhaf ah orodyahan aan dhammaad lahayn iyo arcade, Maaddaama aan la adeegsan awoodeenna ma awoodi doonno inaan sii noolaanno muddo ku filan. La dagaalanka nooc kasta oo wuxuush iyo cadaawayaal waxaan ku dari doonaa dhibco markaa lagu beddeli karo cusbooneysiinta awoodaha qaarkood.
Muuqaalka codka iyo hareeraheeda
Mas'uuliyiinta Madow waxay si dhakhso leh kuugu qaadi doonaan adduun sixir ah mahadsanidiinteeda cajiibka ah deegaankana si caqli ku dheehan tahay ayaa dib loogu abuuray qaab muuqaal ah oo si dhakhso leh uga soocaya ciyaaraha kale ee la midka ah.
Aynu nidhaahno wax kasta oo ku jira Mas'uuliyiinta Madow ayaa si habboon loo doortay si loo abuuro ciyaar aad u wanaagsan oo loogu talagalay Android oo aad ku raaxeysan doonto daqiiqadda ugu horreysa ee aad ciyaareyso kulan.
Farsamoyaqaannada fudud ee ciyaarta weyn
Dad badan oo cadaw ah ayaa u muuqan doona inay tahay inaan baabi'ino adeegsiga mid ka mid ah afarta awooddeena sida xoogga seefta, tan dhulka, tan dabka ama tan hillaaca. Sidaan horay ugu sii soconno meelaha kala duwan isku dhafka awoodaha kala duwan ee aan leenahay waxay ka dhigan tahay farqiga u dhexeeya guusha ama dhimashada.
Halkan waa halkaas oo jahwareerka dagaalku ka yimaado ciyaarta iyo xikmada ogaanshaha xirfada la isticmaali karo waqtiga saxda ah. Waxaan sidoo kale yeelan doonnaa xoogaa gaar ah sida fuulitaanka faraskeena si aan ugu dhex galno kooxaha cadowga waqti cayiman oo naga hor istaagi doona inaan gudubno.
Ilaaliyaha Madow maahan bilaash, in kastoo hada aad awoodid ugu raaxeyso qiimaha € 0,50. Way adagtahay in maya la yiraahdo ciyaar qiimahan oo ku siin doonta saacado wanaagsan oo baashaal iyo madadaalo ah.
Jetpack Joyride ayaa mustaqbal ahaan loo dhigay bedel ahaan
Ciyaar la mid ah Ilaaliyeyaasha Madow laakiin mawduuc aad u kala duwan sida uu yahay mustaqbalku waa Jetpack Joyride.
Jetpack Joyride waa bilaash dukaanka Play oo waxay inala joogtay muddo dheer in ay na siiso wakhtiyo farxad leh oo xiiso leh. Orodyahan aan dhammaad lahayn oo na soo gaadhsiiyey ujeeddada isku dayga ah in aannu sida ugu macquulsan u gaadhno iyada oo ku saleysan awoodaha iyo awoodaha kala duwan.
Iyadoo qaarkood naqshadeynta wanaagsan, gameplay iyo frenetic action waa cinwaan kale oo weyn oo aan ka maqnaan karin ciyaarta ciyaarta fiidiyowga ee gamer cimriga dheer.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Ilaaliyeyaasha Madow, ciyaar dhaqso badan oo ficil ah oo lagu buuxiyo seefaha oo dhan
Umi Zero, oo leh shaashad Super AMOLED iyo processor 8-core ah oo ka yar 250 euro